Abaalmarinta Komla Dumor - BBC News Somali
Abaalmarinta Komla Dumor
19 Jannaayo 2015
Image caption Komla Dumor
Naxdin iyo murugo badan ayaa hareysay guud ahaan BBC-da kaddib markii uu soo baxay warka ku saabsan geerida Komla Dumor.
Waxa uu marayay xirfad ahaan heerkii ugu sareeyay, waxa uuna qaab cusub u eegayay wararka ku saabsan qaaradda Afrika.
Komla Dumor waxa uu BBC-da ku soo biiray sanadkii 2007-dii kaddib muddo toban sano ah oo uu ka shaqeynayay warbaahinta gudaha dalkiisa, halkaasi oo uu ku guuleystay abaalmarinta weriyaha sanadka ee dalkaasi Ghana.
Intii u dhexeysay sanadihii 2007-dii iyo 2009-kii, waxa uu daadihin jiray mid ka mid ah barnaamijyada subaxnimo ee idaacadda BBC-da ee dibadda la hadasho ee Network Africa, barnaamijkaasi oo xiiso geliyay dhageysteyaasha BBC-da ee qaaradda Afrika iyo waliba isaga oo ahaa soo saare barnaamij oo shaqeeya xilliyada habeenkii isla markaana ka hawlgalayay Bush House.
Intaa kaddib waxa uu daadihin jiray barnaamijka The World Today.
Image caption Komla
Sanadkii 2009-kii waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay ee daadihiya barnaamijka Africa Business Report. Kaddib waxa uu billaabay barnaamijka Focus on Africa TV.
Komla Dumor, waxa uu isaga kala gooshay guud ahaan qaaradda Afrika, isaga oo kulamo la qaadanayay ganacsatada ugu waaweyn qaaradda isla markaana soo tabinayay wararka ku saabsan horumarka cusub ee dhanka ganacsiga.
Waligii iska ma uusan indha tiririn wararka naxdinta leh ee qaaradda Afrika, balse waxaa uu qaatay dareen dhab ah oo ku aadan Afrika iyo dib u soo curashada Afrika oo uu markhaati ka ahaa.
Dadkii uu wareysiyada la yeeshay waxaa ka mid ahaa Bill Clinton, Bill Gates, Kofi Annan iyo Aliko Dangote.
Komla waxa uu si toos ah u soo tebiyay dhacdooyin waaweyn sida dhimashadii Nelson Mandela, oo uu wareysi gaar ah la yeeshay qoyskii Mandela oo ku aaminay in ay u sheegaan arrin qoys oo nadir ah isla markaana xasaasi ah.
Sanadkii 2013-kii, majaladda New African magazine ayaa ku soo dartay liiska 100 qof ee ugu saameynta badan qaaradda Afrika. Waxa uu jaamacadda Ghana ka qaatay shahaadaha koobaad ee degree-ga iyo waliba shahaadada mastarka oo uu ka qaatay jaamacadda Harvard.
Komla Dumor waxa uu ifka uga tagay xaaskiisa oo uu aad u jeclaa iyo saddex carruur ah. Waxa uuna noqonayaa qof aad loo tabay.
Abaalmarintani loogu magac daray Komla Dumor, ayaa weriyeyaasha da’ yarta ah ee qaaradda Afrika siin doonto fursad ay ku helaan xirfad muhiim ah, iyo waaya aragnimo muddo saddex bilood ah oo London ay BBC-du ku siin doono fursad tababar goobta shaqada ah.
Qofka ku guuleysta abaalmarintaasi waxa uu helayaa fursad uu 265 milyan oo qof uu wararka iyo barnaamijyada ku gaarsiiyo TV, raadiya iyo online-ka guud ahaan caalamka oo dhan.
Dadka daneynaya abaalmarintaasi waxa ay codsiyadooda soo dhiiban karaan ilaa iyo saqdai dhexe 2-da bisha Febraayo ee foodda inagu soo hayso. Si aad wax badan uga ogaato arrintaasi fadlan booqo bbc.com/komladumor.
Waxaa la rajeynayaa in abaalmarintaasi ay dhiiri gelin doonto weriyeyaasha da’ yarta ah si ay u maraan waddadii uu maray Komla Dumor, oo saameynta intaasi dhan ku yeeshay BBC-da isla markaana ahaa nin laga jeclaa guud ahaan dalka Ghana, qaaradda Afrika iyo caalamka oo dhan.